Wararka Maanta: Khamiis, Dec 17, 2020-Daacish oo soo saartay muuqaal cusub oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan Soomaaliya
Wararka Maanta- Khamiis, Dec 17, 2020
Daacish oo soo saartay muuqaal cusub oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan Soomaaliya
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Ururka Daacish ee Soomaaliya Wilaayadda, ayaa soo saartay muuqaal cusub oo diirada lagu saarayo in kooxda mar kale ku dhawaaqday inay cadow ku yihiin Alshabab.
Muuqaalka cusub oo la soo duubay, waxay Daacishta ku riddaysay Al-Shabaab, Taalibaan iyo Al-Qaacida.
Daacish waxay sheeganeysaa inay fashilisay shirqoolo badan oo ay ka dambeeyaan Alshabab.
Fiidiyowgu wuxuu kaloo muujinayaa dagaal u dhexeeya labada koox ee aagga buuraleyda Al-Miraale ee Puntland, kaasoo sababay dhimashada laba dagaalyahanno oo katirsanaa Alshabaab.
Daacish waxay muuqaalka kusoo bandhigaysaa, maxaabiis, dagaalamayaal uga dhintay weeraro ka dhacay gudaha Soomaaliya, waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya saraakiil sare iyo askar cusub oo ay qoratay.
Waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya hub ay kusoo furteen dagaalo iyo sida ay u qorsheeyaan weerarada.
Sida Gacmaha Loo Maydho
1/31/2021 10:23 PM EST
Gacmaha oo la maydho waa habka ugu wanaagsan ee lagaga hortaggi karo fiditaanka jeermiska iyo cudurada. Gacmaha wasakhda ah waxa ay qaadi karaan jeermiska cudur sidaha ah kuwaas oo sababi kara in qofku xanuunsado ama uu xanuun u gudbiyo cid kale. Noolayaasha il-ma aragtiga ah ee ay ka mid yihiin Bakteeriyada, Fayraska, dulinyada fangaska iyo kimikooyin kale ayaa si toos ah jidhkeena u gali kara marka aynu taabano wejigeena, indhaha, sanka iyo afka ama waxa ay si aan toos ahayn u gelli karaan, marka ay gacmo aan nadiif ahayn taabtaan goobo wasakh leh oo ay taabteen dadyaw kale ama meelaha cunnada lagu diyaariyo. Gacmaha oo saabuun iyo biyo lagu maydhaa si joogto ah waxay horseedaan abuurka safka koowaad ee difaaca jidhka kaas oo ka hortaga fiditaanka cuduro badan. Kuwaas oo ay ka mid yihiin Durayga, Shubanka iyo cuduro kale oo ka sii khatarsan sida Qoor-gooyaha, Dhanjafka ama Jooniska iyo cuduro kale oo badan. Fiidyahan laba cabirlaha ahi waxaa uu sharaxayaa muhiimada gacmo maydhista.
Muuse Biixi '' Soomaaliya waxey noo furtay albaab dhib yar oo uu ictiraafku ku iman karo
12/17/2020 11:08 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay kulamadii uu la soo qaatay madaxda dalka Kenya, gaar ahaan madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Somaliland oo joojisay tartan kubada cagta ah oo loo qaban lahaa hablaha
12/17/2020 5:40 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Somaliland ayaa maanta joojisay tartan kubada cagta ah oo lagu waday in loo qabto hablaha 6 gobol oo katirsan Somaliland.
Kenya oo qunsuliyad ka furaneysa Somaliland
12/17/2020 3:53 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Dowladda Kenya ayaa qunsuliyad ka furaneysa gobolka Jamhuuriyada Iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland kaasoo u muuqda mid u ololeynaya aqoonsi caalami ah.
Midowga Musharixiinta oo ka hadlay ciidamo la duldhigay Aagaga ay ka deggan yihiin magaalada Muqdisho
12/17/2020 3:36 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaailya oo aad u hubeysan ayaa lagu arkay qeybo ka mid ah xaafaddaha iyo Aagaga ay deggan yihiin midowga musharixiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda hannaanka ay dowladdu u maamuleyso doorashada.
Maraykanka oo maxkamad soo taagay muwaadin u dhashay Kenya oo loo haysto inuu qorshaynayay weerar lamid ah weerarkii 9/11
12/17/2020 12:45 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Muwaadin u dhashay Kenya oo loo haysto inuu ka tirsan yahay al-Shabaab tababar duuliyana ku soo qaatay Filibiin ayaa lagu soo oogay dambiyo argagixisanimo, oo ay ka mid tahay inuu maleegayay afduub diyaaradeed oo lamid ah weerar u eg 9/11.
Jidadka muhiim u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho oo xiran
12/17/2020 12:08 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Ciidamada nabad-galyada dowladda Soomaaliya ayaa xiray jidadka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho sababo la xiriira cabsi laga qabo dibadbaxyo rabshado wata oo mar kale ka dhaca magaalada.
12/17/2020 12:03 AM EST
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) - Dowladda Federaalka ayaa ku amartay Dilomaasiyiinteeda ka jooga magaalada Nairobi in ay si deg deg dalka ugu soo laabtaan, kaddib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in ay xiriirkii Diblomaasiyadeed u jirtay dalka Kenya.
Act with ‘maturity’ ex-Turkish ambassador to Somalia tells Farmaajo over political crisis -HOL
12/17/2020 8:22 AM EST
NAIROBI (HOL) - Former Turkish ambassador to Somalia Kani Torun has called on President Mohamed Farmaajo to act with ‘maturity’ and ‘compromise’ like his predecessors in handling the ongoing political crisis in the country.
First ever Somali language radio station opens in Isiolo town -HOL
12/17/2020 6:58 AM EST
NAIROBI (HOL) - The first ever Somali language radio station in Isiolo has opened its doors drawing praises by locals who said the station will be instrumental in providing a platform for advancement of culture and promoting cohesion among residents of the cosmopolitan town.
Somalia orders remaining diplomatic staff in Nairobi to return in five days -HOL
12/17/2020 4:39 AM EST
MOGADISHU (HOL) - Somalia has ordered all its embassy officials and families to vacate Kenya within five days amid an escalating diplomatic war with Kenya which has since remained mute over the tiff.
Tigray crisis: How Ethiopian doctors fled militia attacks -BBC
12/17/2020 1:36 AM EST
Kenya to Open Consulate in Breakaway Somali Region’s Capital -Bloomberg
12/17/2020 12:22 AM EST
Somalia’s opposition urges Turkey not to send arms to police unit -Reuters
12/17/2020 12:17 AM EST
Despite Somalia Severing Ties, Kenya Says It Won't Expel Somalis -VOA
12/17/2020 12:14 AM EST
Appointee will be board’s first Somali American -Sun This Week
District 191’s first Somali American School Board member will be a homegrown product of the district.